ပင်တိုင်ကဏ္ဍ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 749
ကာတွန်း ကူမိုးကြိုး – အတွင်းက လူ၊ အပြင်က လူ … မတ် ၂၂၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
“၂၀၀၈အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးမြင်းရိုင်း”ကို ဇောင်းထဲသွင်း ဇက်ခွံ့လိုက်သည့် “အရေးကြီးအဆို” တူမောင်ညို (၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၀ ရက်) ယခုအခါ ကြံ့ဖွံ့အမတ်များက “၂၀၀၈အခြေခံဥပဒေ” ပြင်ဆင်ရေးလှုပ်ရှားမှုကို ထားမြစ်ချုပ်ကိုင်နိုင်မည့် အဆိုတစ်ခုကို ပြည်သူ့ လွှတ်တော်တွင် တင်သွင်းအတည်ပြုခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့က ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် တင်သွင်းအတည်ပြုခဲ့သည့် သူရဦးအေးမြင့်၏ “အရေးကြီးအဆို” သည် “ဝင်- ပြင်”သမား (ဝင်-ပြင်သမား = ၂၀၀၈အခြေခံဥပဒေဘောင်ထဲဝင်ပြီး အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်မယ်လို့ ဆိုသူတွေ) တွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှ ကို တားမြစ်ချုပ်ကိုင်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဦးဝင်းတင် စကားနဲ့ပြောရရင် “သော့ခလောက်ကြီးတန်းလန်းနဲ့ လွှတ်တော်ထဲဝင်သွားတဲ့ ဒီချုပ်အမတ်တွေ”ကို နောက်ထပ် သော့ခလောက်တစ်လုံးနဲ့ ထပ်ပြီးခတ်လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် “တစ်ဦးချင်း၊ တစ်ဖွဲ့ချင်း လိုရာဆွဲဆောင်ရွက်ခြင်းသည် နိုင်ငံတော်အတွက် အန္တရာယ်ကြီးမားသည်”ဟု ပြည်သူ့ လွှတ်တော်...
ကာတွန်း စောငို – ဘုံပျောက်တဲ့ ဘုရားကြီး
ကာတွန်း စောငို – ဘုံပျောက်တဲ့ ဘုရားကြီး မတ် ၂၁၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
ပြည်သူ့အတွက် ရေရှည်အကျိုးစီးပွားတဲ့ဗျား မောင်လူရေး၊ မတ် ၂၁၊ ၂၀၁၃ (လက်ပံတောင်းကို ဖတ်ရှုခြင်း အပိုင်း ၃) လက်ပံတောင်းတောင်ကိစ္စမှာ နိုင်ငံတော် ဆိုတာ ဘယ်မှာလဲလို့ ရှာပုံတော်ဖွင့်မိတယ်။ သတ္ထုတွင်းနဲ့ ဦးပိုင်နဲ့ စာချုပ်တယ်၊ ပီးတော့ ဦးပိုင်နဲ့ ဝမ်ပေါင် စာချုပ်တယ်၊ အဲဒီထဲမှာ ဦးပိုင်က ၅၁၊ ဝမ်ပေါင်က ၄၉ ခွဲယူကြမယ်။ သတ္ထုတွင်းဝန်ကြီးဌာနဆိုတဲ့ နိုင်ငံတော်လားမသိဘူး၊ အဲဒါပျောက်သွားပြီ။ ဒီလိုဆို ဦးပိုင်က ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ကဆိုတော့ ကာကွယ်ရေးက နိုင်ငံတော်လေလားပေါ့။ ဒါလဲ မဟုတ်ပြန်ဘူး၊ ကာကွယ်ရေးကငွေကို နိုင်ငံတော်က စာရင်းတောင်စစ်ခွင့်မရှိလို့ အခြေခံဥပဒေကဆိုထားတာကတကြောင်းရယ်၊ နောက်တခါ ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်ကို နိုင်ငံတော်ကတောင်းခံတာရယ်ဆိုတော့ ဒီနေရာမှာ ကာကွယ်ရေးကလဲ နိုင်ငံတော်မဟုတ်ပြန်ဘူး။ နိုင်ငံတော်အတွက်လို့တော့ ဒေါ်စုရော၊ ကော်မရှင်ရော၊ ဟိုလူရော၊ ဒီလူရော ပြောနေကြတာဘဲ။...
ငြိမ်းချမ်းအေး မတ်လ ၂၁၊ ၂၀၁၃ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ လက်ရှိ ရပ်တည်ချက်၊ ဗမာပြည်ရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု လမ်းကြောင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးတက်မှု အလားအလာ စတဲ့ ဗမာ့အရေးကိစ္စတွေ ကို ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်တုန်းက အောက်စဖို့ဒ် တက္ကသိုလ် အရှေ့တောင်အာရှရေးရာ ဆွေးနွေးပွဲ အစီအစဉ် အနေနဲ့ ပညာရှင်များက ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ကြရာမှာ “She had lost “moral authority” by failing to be more vocal on human rights abuses.” ဆိုပြီးတော့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု တွေ အပေါ် ဒေါ်ဆောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့ အရင်လို ခပ်မာမာရပ် အသံမထွက်တော့တာကြောင့် သူ့ရဲ့ “Moral Authority”...
ကာတွန်း – လုိုင်လုဏ် မတ်လ ၂၁၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်း မောင်ရစ် – နှလုံးအေးတဲ့ ဆေး မတ် ၂၀၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်း – ဆလုိုင်းစွမ်းပီ မတ်လ ၂၀၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကံထွန်းသစ် မတ်လ ၂၀၊ ၂၀၁၃ ရိုမန်ကက်သလစ်ဘာသာဝင်တို့၏ ရဟန်းမင်းကြီး ဘာနာဒစ်၏နေရာကို အာဂျင်တီးနားဇာတိ ရဟန်းမင်းကြီးဖြင့် အစားထိုးခန့်သည့်နောက်တနေ့၊ ပုပ်ဟောင်း၏နေရာကို ပုပ်သစ်ဖြင့်အစားထိုးပွဲ၊ ဘာတီကန်နန်းတော်ခေါင်းတိုင်မှ ရွေးချယ်မှုအောင်မြင်ခြင်းအထိမ်းအမှတ် မီးခိုးဖြူထွက်လာသည့် သတင်းကို ကိုယ်ငေးနေစဉ် … “ဟလို …” ကိုယ်၏ခွန်းဆက်သံပင်မဆုံး၊ “ဘုန်းဘုန်း … သတင်းဖတ်ပြီးပလား … မစိုးရိမ်ဆရာတော်ကြီး ပျံလွန်တော်မူသွားပြီဘုရား” LA က အစ်မ၊ ဆရာတော်ကြီးအကြောင်း၊ နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်က ဂယက်၊ ဟိုအကြောင်း သည်အကြောင်း အနည်းငယ်စီပြောကာ ဖုန်းချသွားသည့်တိုင် ပဲ့တင်ထပ်ကျန်ခဲ့သည်က “ဆရာတော် ပျံတော်မူ သွားပြီ” … တဲ့။ “ဆရာတော်ဘဒ္ဒန္တ ရာဇဓမ္မာဘိဝံသ”၊ မစိုးရိမ်တိုက်ကြီးတို့၏ နာယက၊ စာသင်သားတို့၏ဆရာ၊ ထက်မြက်သော၊...
ကာတွန်းစောငို – ၀မ်ပေါင်နဲ့ ဦးပိုင်ဖက်ကိုလည်း … တချက်လေး စောင်းငဲ့ကြည့်ဦး မတ် ၂၀၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
Page 749 of 851«1...747748749750751...851»